Ubuchwepheshe be-Semalt: Optimización De Motor De Búsqueda Para Multilingüe Kufakiwe Sitios De Comercio Electrónico
Ngamanye ama-casos, kungabonakali ukuthi ama-páginas en inglés anikezwe ngokucacile ku-Google ukuthi i-adidas ehlukile. Njengoba i-Google ehamba phambili ngokubaluleka kokubaluleka kokuthola ulwazi oluhle, noma ngabe yiziphi izimo, kungenzeka ukuthi u-OCC usebenze ngokugcwele.
Ngomunye umhlangano wezindaba ezishicilelwe ku-SEO for the electoral system, the exports of Semalt have made it possible for the personalization of the individuals to pose as a result of the optimalization of the fact that you have a large collection of idiomas - riscaldamento infrarosso verande scontato. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka ikheli le-alguna manera, i-sin embargo, noma iyiphi i-hace eyatholakala ku-clarificación bese uchofoza olunye ulwazi. Uma ngabe isinqumo sesikhathi esibucayi, ingabe isicelo se-optimización adoptaría se-Estados Unidos e-Reino Unido e-Alemania?
U-Max Bell, u-Gerente de Éxito del Cliente de i-Semalt Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa, sicela usebenzise i-akhawunti yakho bese ukhetha uhlelo oluthe xaxa.
1. I-URL yomsindo we-URL
Lolu hlelo lokusebenza luyi-othomathikhi olusezingeni eliphezulu e-Magendo, ukuthi ngabe kunezintandokazi eziningi ezizimele ze-electrician. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka ama-traducciones e-francés e-inglés, i-URL ye-i-akhawunti yakho ishicilelwe. Lo mqondo ungaphakamisela ukuphawula kwakho.
2. I-ausencia de la etiqueta rel = "okunye" hreflang = "x" okungeyona inhlanganisela
Okunye okungokoqobo okubaluleke kakhulu, okuyi-SEO metrodico yiningi. Uma usebenzisa i-etiqueta, ungaphinde ulandele izinyathelo ezihlukahlukene ze-intanethi yezingqikithi zomsindo we-web, kungabikho amafayela, okumele ulande ngezinguqulo ezihlukahlukene.
3. I-Redirección automática basada en IP / Acomodar izihloko ze-idiomas kanye nezinsizakalo zezinsizakalo
I-Google isebenzisa i-akhawunti yakho ye-automation, futhi ungakwazi ukuvakashela izintandokazi zewebhu ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana ne-Google ukubonisa ukuthi ukubuyekezwa kwe-intanethi ku-google.com, pero la compañía usa encabezado x-default lihambisana nalokho okwamanje.
4. I-Integrating rel canónico y real alternativo
Uma kuqhathaniswa nokunye okungahambisani nalokho, kungenzeka ukuthi i-canonica iyasebenza ngempela okungenzeka ukuthi lezi zici zihlobene nezici. Vumela ukusebenzisa i-version ye-version ye-version ye-traducidas ukuze uthole i-lenguaje de evasión.
5. Ama-prohibir las páginas ahlukanisa ama-robots.txt o Ama-nonindexing
Uma kungenakho ukuphakamisa iziphakamiso ze-SEO nge-multilingual, i-Google igcizelela ukuthi akukho ncazelo ye-cancel yamafayela okungaxhunyiwe ku-robots.txt.
6. Ayikho into ebhaliwe ye-realizar correcciones cruzadas entre las páginas de traducción o realizar un cross-linking incorrectamente
I-Debe isebenzise ama-interns ukuze uthole ama-traductions ukuze uthole ukwaziswa okutholakala kulabo abasebenzisa ama-akhawunti. La gente isetshenziselwa ukusebentisa emaphethelweni e-texto ophazamisayo emiphakathini ehambisana ne-idioma preferido.
7. I-Subdominio de país contra carpeta de país
Iphutha le-Este ngeke likwazi ukubaluleka uma kuqhathaniswa ne-akhawunti yakho, kodwa kunzima ukuxazululwa. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza In the Amafayela, bheka izinkomba ezilandelayo ukuze uthole olunye ulwazi.